Warbixintaan FAO iyo World Bank: maleeshiyo gobolada dhexe ka yimid oo aan aqoon tacab beereed - Latest News Updates
Warbixintaan FAO iyo World Bank ee Rebuilding Resilient and Sustainable Agriculture in Somalia, dadbaa yiri waa wax uu shisheeyaha ujeeddo kale ka leeyahay, warbaahintana ka cambaareeyay. Warbixinta waxay sheegtay in maleeshiyo gobolada dhexe ka yimid oo aan aqoon tacab beereed ay beero ku heystaan Shabeelaha Hoose.
Igaarkii ay Maano haddii uu Zuuluu South African ah baangad ku dilo, baroorasho iyo mudaaharaad, haddii uu Aadan Galayr oo beertiisa heystay uu baas mariyana, dad baa difaacaya Galeyr.
Cadawgaaga in uu ku dilo iyo walaalkaa in uu ku dilo midkee xanuun badan? Cadaw shisheeye wax walba waad ka filataa, tan walaalkaaga ayaa xannuun badan.
Shabeelaha Hoose in ay maleeshiyo beero iyo hanti ku heysato waa sax. Meelo badan oo dalka ka mid ahna waa la mid. Dad baa inta ay Television soo istaagaan leh, “warbixinta sheegaysa in beero iyo hanti la haysto waxaa looga gol leeyahay in Soomaalida la isku diro”.
Sidee dad saafi ah oo aan waxba kala haysan la isugu diraa? Waa sax dulmi jira ka hadalkiisa ayay soo noolaynaysaa, laakiin dad isku qalbi fayoow cidna isku ma diri karto.
Xitaa waxa la haysto haddii ay tahay hal beer oo keliya gobolka oo dhan ama xitaa beer barkeeda, aan iska raadino muwaaddinimo ee la dagaallan burcadka ama la hadal hadduu uu walaalkaa war kaa maqlaayo yahay, ama ugu yaraan afkaaga qabso oo daalim ha taageerin.
Dulmi waa dulmi. Ama Farmaajo ha ku sammeeyo Qalbi Dhagax ama C Cabdishakuur, ama Cabdi Qeybdiid ama ajnabi South African ah ha ku sammeeyo muwaaddin, ama ina adeerkaa Faarax ha ku sammeeyo Ay Iishow ama Dable Caydiid ha ku sammeeyo Wasiir Siraaji AUN ama anigaba aan adiga kugu sammeeyo.
Sabab dulmiga qaar loogu hiilliyo midna looga kaco ma jirto, haddii ay sidaas sax ku la noqoto, meel kale ha eegin, adigaa ah sababta aan isku dilnay oo aan adduunka uga harnay.
Muwaaddin waa kii indho mideysan wax ku arka muwaaddiniinta kalena isku si uga damqada!
Burcad hanti umadadeed heysata, waxba idin ka ma dhaxeeyaan, haddii aadan adigaba asal aadan burcad kale ahayn.